အွန်လိုင်းကနေ Digital Product တွေဖြစ်တဲ့ ဘာသာပြန် e-book တွေ၊ လုပ်ငန်းသုံး Software တွေကို ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလေးလုပ်ချင်လို့ပါ။ | Su See Yar - Maynmar's first crowdfunding platform
အွန်လိုင်းကနေ Digital Product တွေဖြစ်တဲ့ ဘာသာပြန် e-book တွေ၊ လုပ်ငန်းသုံး Software တွေကို ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလေးလုပ်ချင်လို့ပါ။
ပင်မစာမျက်နှာ / အွန်လိုင်းကနေ Digital Product တွေဖြစ်တဲ့ ဘာသာပြန် e-book တွေ၊ လုပ်ငန်းသုံး Software တွေကို ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလေးလုပ်ချင်လို့ပါ။
ကျွန်တော့်နာမည်က ကိုမျိုးအောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်မှာနေပါတယ်။ ကျွန်တော်က အွန်လိုင်းကနေ Digital Product တွေဖြစ်တဲ့ ဘာသာပြန် e-book တွေ၊ လုပ်ငန်းသုံး Software တွေကို ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလေးလုပ်ချင်လို့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကတည်းက စပြီး လိုအပ်တာတွေအတွက် လေ့လာမှု၊ ပြင်ဆင်မှုတွေ စတင် ခဲ့ပါတယ်။ နည်းပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ သင်တန်းတွေတက်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း လေ့လာပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့မှာ Online Digital Product ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုပြီး စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုတည်ထောင်ရခြင်းကလည်း Digital Product တွေကို မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်းမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာစေဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဖောက်သည်တွေကို နိုင်ငံခြားမှ Digital Product တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးနိုင်စေဖို့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကထုတ်တဲ့ Digital Product တွေကို နိုင်ငံခြားမှာ ပြန်လည် ရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးသွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားမှ Digital Product တွေကို ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံး RLP.com Website မှာ Member ကြေးသွားပြီး Membership ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ RLP.com ဆိုတာကတော့ Digital Product တွေကို ပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ Website တွေစုစည်းထားတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုစတင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် RLP.com မှာ Member ဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Membership လစဉ်ကြေးက တစ်ဆယ်ဒေါ်လာ ဖြစ်ပါတယ်။ RLP.com မှာ Membership ဝင်ပြီးတာနဲ့ လုပ်ငန်းသုံး Software တွေ၊ e-book တွေကိုဝယ်ယူပြီး ကျွန်တော်တည်ထောင်ထားတဲ့ Digital Product ရောင်းဝယ်ရေး Group မှတစ်ဆင့် ပြည်လည်ရောင်းချပေးသွားဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ Software ကို USD 125 နဲ့ဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာငွေ ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ပြန်လည်ရောင်းချသွားပါမယ်။ e-book တစ်အုပ်ကို ဝယ်ဈေး USD5ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး မြန်မာငွေ ၃,၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ပြန်လည်ရောင်းချသွားမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ Digital Product များလည်းရှိပါတယ်။ Basic Music Theory Course, Advance Music Theory Course, Advance Guitar Course, မော်တော်ယဉ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နည်း၊ ကျောင်းသားများအတွက်သင်ရိုး စတဲ့ ဘာသာပြန် e-book တွေကိုလည်း PDF အနေနဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာပါ။
ဥပမာ ဂီတသင်တန်းတစ်ခုကို သင်တန်းကြေး ၂၀,၀၀၀ ကျပ်ပေးပြီး တက်ရမယ်ဆိုပါစို့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Digital Product ထဲမှာ ဂီတသင်တန်း Course PDF တွေလည်း ပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဂီတကို လေ့လာလိုသူတွေအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျပိုပြီး သက်သာမှုရှိလာမယ်၊ လွယ်ကူအဆင်ပြေလာစေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Digital Product တွေဟာ Physical ပိုင်းတွေထက်အားသာချက်တွေရှိပြီး Digital Product တွေကို နိုင်ငံတကာအကြိုက် ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ငွေကြေးများစွာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလေးကို ဖြစ်မြောက်အောင် အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် ကွန်ပြူတာဝယ်ရန်၊ Member ကြေးများနှစ်စဉ်သွင်းရန်၊ Internet Data နှစ်စဉ်သွင်းရန်၊ Facebook Marketing အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ အထွေထွေစရိတ် စတာတွေကို အသုံးပြုဖို့ ငွေကြေးအရင်းအနှီးလိုအပ်နေတဲ့အတွက် ရန်ပုံငွေစုဆောင်းလိုပါတယ်။
ကွန်ပြူတာ - ၁၀ သိန်း
Boost အတွက် - ၃ သိန်း
Member ကြေး - ၅ သိန်း
E-book - ၅ သိန်း
Software နှင့်အခြား - ၇ သိန်း
(၁) ၅,၀၀၀ ကျပ်
ငွေကျပ် ၅,၀၀၀ ထည့်ဝင်ကူညီသူများကို လုပ်ငန်းရှိ ဘာသာပြန် e-book (၂) အုပ်နှင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နိုင်ငံခြား eBook (၁) အုပ် ရယူခွင့်များဖြင့် ပြန်လည်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပါမည်။
စာအုပ်ရွေးချယ်ရန်အတွက် စာအုပ်အဟောင်းနှင့် စာအုပ်အသစ်စာရင်းကို Facebook တွင် တစ်ပတ်ခြားတစ်ခါ တင်ပေးပါမည်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ e-book ကို Messenger မှတစ်ဆင့် အကြောင်းကြားပါက Download ပြုလုပ်ပေးပါမည်။
6. Body Builiding
(၂) ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
ငွေကျပ် ၁၀,၀၀၀ ထည့်ဝင်ကူညီသူများကို လုပ်ငန်းရှိ ဘာသာပြန် e-book (၂) အုပ်နှင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နိုင်ငံခြား e-book (၁) အုပ်အပြင် SME Entrepreneur Note Group တွင် (၃) လ အခမဲ့လေ့လာခွင့်များဖြင့် ပြန်လည် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပါမည်။
(မှတ်ချက်။ ။ SME Entrepreneur Note Group ထောင်ထားပါတယ်။ Group Member အဖွဲ့ဝင်ကြေးအနေနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို လစဉ်ကြေး ၅,၀၀၀ ကျပ် ထည့်သွင်းရပါတယ်။)
(၃) ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
ငွေကျပ် ၅၀,၀၀၀ ထည့်ဝင်ကူညီသူများကို လုပ်ငန်းရှိ ဘာသာပြန် e-book (၂) အုပ်နှင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နိုင်ငံခြား e-book (၂) အုပ်အပြင် SME Entrepreneur Note Group တွင် (၆) လ အခမဲ့လေ့လာခွင့်များဖြင့် ပြန်လည် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပါမည်။
(၄) ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်
ငွေကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် ထည့်ဝင်ကူညီသူများကို ကျွန်တော်တို့ထုတ်သည့် Digital Product များကို (၁) နှစ်တိတိ ရယူခွင့်ဖြင့် ပြန်လည်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပါမည်။
တစ်နှစ်လျှင် ဘာသာပြန် e-book ခြောက်အုပ်ထွက်ရှိပါမည်။ တစ်လလျှင် Online မှဝယ်ယူထားသော e-book နှစ်အုပ်ကိုပြန်တင်ပေးပါမည်။
(၅) ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်
ငွေကျပ် ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ထည့်ဝင်ကူညီသူများကို ကျွန်တော်တို့ထုတ်သည့် Digital Product များကို (၂) နှစ်တိတိ ရယူခွင့်ဖြင့် ပြန်လည်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပါမည်။
There is no contributor found.
0 MMK Funded
30L MMK Goal
I am Ko Myo Aung from Pyay.I want to start an Online Business that distributes Online Digital Products such as translated e-books and business software. I made necessary preparations to start an Online Business that distributes Online Digital Products such as translated e-books and business software. I attended technical training and prepared myself. On 2021, on September 22, I started an Online Digital Product Selling Business with the purpose of making digital products more widely used in Myanmar society, introducing digital products from foreign countries to customers in Myanmar, and reselling Myanmar-made digital products abroad.
Pyay City, Myanmar
ငွေကျပ် ၅,၀၀၀ ထည့်ဝင်ကူညီသူများကို လုပ်ငန်းရှိ ဘာသာပြန် e-book (၂) အုပ်နှင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နိုင်ငံခြား eBook (၁) အုပ် ရယူခွင့်များဖြင့် ပြန်လည်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပါမည်။ စာအုပ်ရွေးချယ်ရန်အတွက် စာအုပ်အဟောင်းနှင့် စာအုပ်အသစ်စာရင်းကို Facebook တွင် တစ်ပတ်ခြားတစ်ခါ တင်ပေးပါမည်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ e-book ကို Messenger မှတစ်ဆင့် အကြောင်းကြားပါက Download ပြုလုပ်ပေးပါမည်။ Category: 1. Advertising 2. Affiliate Marketing 3. Beauty 4. Business 5. Copywriting 6. Body Builiding 7. Career 8. Cooking 9. Education 10. Fitness 11. Finance
ငွေကျပ် ၁၀,၀၀၀ ထည့်ဝင်ကူညီသူများကို လုပ်ငန်းရှိ ဘာသာပြန် e-book (၂) အုပ်နှင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နိုင်ငံခြား e-book (၁) အုပ်အပြင် SME Entrepreneur Note Group တွင် (၃) လ အခမဲ့လေ့လာခွင့်များဖြင့် ပြန်လည် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပါမည်။ (မှတ်ချက်။	။ SME Entrepreneur Note Group ထောင်ထားပါတယ်။ Group Member အဖွဲ့ဝင်ကြေးအနေနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို လစဉ်ကြေး ၅,၀၀၀ ကျပ် ထည့်သွင်းရပါတယ်။) စာအုပ်ရွေးချယ်ရန်အတွက် စာအုပ်အဟောင်းနှင့် စာအုပ်အသစ်စာရင်းကို Facebook တွင် တစ်ပတ်ခြားတစ်ခါ တင်ပေးပါမည်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ e-book ကို Messenger မှတစ်ဆင့် အကြောင်းကြားပါက Download ပြုလုပ်ပေးပါမည်။ Category: 1. Advertising 2. Affiliate Marketing 3. Beauty 4. Business 5. Copywriting 6. Body Builiding 7. Career 8. Cooking 9. Education 10. Fitness 11. Finance
ငွေကျပ် ၅၀,၀၀၀ ထည့်ဝင်ကူညီသူများကို လုပ်ငန်းရှိ ဘာသာပြန် e-book (၂) အုပ်နှင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နိုင်ငံခြား e-book (၂) အုပ်အပြင် SME Entrepreneur Note Group တွင် (၆) လ အခမဲ့လေ့လာခွင့်များဖြင့် ပြန်လည် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပါမည်။ (မှတ်ချက်။	။ SME Entrepreneur Note Group ထောင်ထားပါတယ်။ Group Member အဖွဲ့ဝင်ကြေးအနေနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို လစဉ်ကြေး ၅,၀၀၀ ကျပ် ထည့်သွင်းရပါတယ်။) စာအုပ်ရွေးချယ်ရန်အတွက် စာအုပ်အဟောင်းနှင့် စာအုပ်အသစ်စာရင်းကို Facebook တွင် တစ်ပတ်ခြားတစ်ခါ တင်ပေးပါမည်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ e-book ကို Messenger မှတစ်ဆင့် အကြောင်းကြားပါက Download ပြုလုပ်ပေးပါမည်။ Category: 1. Advertising 2. Affiliate Marketing 3. Beauty 4. Business 5. Copywriting 6. Body Builiding 7. Career 8. Cooking 9. Education 10. Fitness 11. Finance
ငွေကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် ထည့်ဝင်ကူညီသူများကို ကျွန်တော်တို့ထုတ်သည့် Digital Product များကို (၁) နှစ်တိတိ ရယူခွင့်ဖြင့် ပြန်လည်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပါမည်။ တစ်နှစ်လျှင် ဘာသာပြန် e-book ခြောက်အုပ်ထွက်ရှိပါမည်။ တစ်လလျှင် Online မှဝယ်ယူထားသော e-book နှစ်အုပ်ကိုပြန်တင်ပေးပါမည်။ Category: 1. Advertising 2. Affiliate Marketing 3. Beauty 4. Business 5. Copywriting 6. Body Builiding 7. Career 8. Cooking 9. Education 10. Fitness 11. Finance
ငွေကျပ် ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ထည့်ဝင်ကူညီသူများကို ကျွန်တော်တို့ထုတ်သည့် Digital Product များကို (၂) နှစ်တိတိ ရယူခွင့်ဖြင့် ပြန်လည်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပါမည်။ တစ်နှစ်လျှင် ဘာသာပြန် e-book ခြောက်အုပ်ထွက်ရှိပါမည်။ တစ်လလျှင် Online မှဝယ်ယူထားသော e-book နှစ်အုပ်ကိုပြန်တင်ပေးပါမည်။ Category: 1. Advertising 2. Affiliate Marketing 3. Beauty 4. Business 5. Copywriting 6. Body Builiding 7. Career 8. Cooking 9. Education 10. Fitness 11. Finance